The yokungcebeleka edolobhaneni Carolino Bugaz (Ukraine): nokungcebeleka
Kukhona e-Ukraine emzaneni lalibalele ka Carolino Bugaz, etholakala endaweni Isizalo ehlanzekile Odessa esifundeni. Ngokusho ngolwazi olungekho emthethweni, igama layo romantic ubophekile ukuba baphendukela Countess Carolina Sobanskaya, elalisendlini uthando NJENGOBA Pushkin. Izazi zomlando nababekade ososayensi bakholelwa kuba umbono oyiphutha futhi baphikisa ngokuthi empeleni emzaneni lithole igama engavamile behlonipha umnikazi ala mazwe Karol Stsibor-Marhotsky. A Bugaz lalibizwa emuva 1770, lapho afike wasungula khona iSikhungo resort.
Leli dolobhana udvweba indaba ethakazelisayo, ijubane avulekile ngisho nalapho ephumule wokuphila, amabhishi amahle, ukuntuleka izitshalo zezimboni kanye sezulu esingavamile. Amanzi lapha kufana ubisi, futhi ugu ligcwele ezimnandi isihlabathi segolide. Abantu bendawo bathi sibonga izimo ezikahle zezulu ulwandle emoyeni zingaba usizo ukuthuthukisa impilo yakho, ashona amandla kwakho kukuhle futhi uhlale ukuqeda ukucindezeleka okungokomzwelo.
Kungenxa lezi ukuza Carolino Bugaz. Nethezeka kule ndawo resort kuyinto ekahle imindeni enezingane, honeymooners nenithanda onokuthula ubumnandi. Le piece of ipharadesi ithanga bemvelo, ilanga sifudumale futhi ebukekayo Black Sea.
Izinto okumele uzenze ngesikhathi resort?
Naphezu kobungako nobuningi bayo encane, edolobhaneni kukhona okuningi ukubona futhi kanjani ukuchitha isikhathi sokungcebeleka. Eza lapha hhayi kuphela kuze kube iholidi ngaphambi ebhishi, kodwa futhi bedoba. fun nokwesabekayo umqondo walesi sifundo, uzothola, njengoba izinhlanzi emanzini oLwandle Olumnyama Motley evamile. Zonke imishini kungaba kuqashwe bedoba. Futhi ngemva kokubamba izinhlanzi eziningi, ungakwazi ngokushesha ukulungiselela ukudla okumnandi ku recipe yakho siqu.
Ngokuhamba kwesikhathi sakhe khulula ukudoba Kunconywa ukuhlola indawo zendawo emizaneni eseduze. Ngo Carolino Bugaz sisindvo setintfo othakazelisayo - ukuzijabulisa zezingane (dolphinarium, zoo, amanzi ipaki) kuya izakhiwo eminingi yasendulo. Kuyoba ikuthinte uhambo yokurarulula indunduma Shabo "Popov ithuna", Akkerman inqaba, le Hamlet Neubay catacombs. Thola uhlu izinkambo ezithakazelisayo kungaba kunoma iyiphi ejensi uhambo.
Kuningi yamanzi izikhangibavakashi resort Carolino Bugaz. Nezokungcebeleka izikhungo unike izivakashi ezihlukahlukene yokuzilibazisa ngamakhasimende multi-yobudala izilaleli. Iningi amahhotela zitholakala umugqa wokuqala, emabhishi anemisila ukuzijabulisa izikhungo, amanzi kanye ifakwe ngokurhaba izindlela (izambulela, deckchairs). Nge izivakashi sizodingida abafundisi professional diving kanye ngomkhumbi. Thrill uthole umthamo adrenaline futhi eziningi imizwelo ngonyaka ozayo.
Edolobhaneni Carolino Bugaz athuthukiswe kahle izivakashi. Ukuthola indawo efanele akuyona inkinga. Ngezinye isevisi yakho - egibela izindlu, izindlu zezihambi, amahhotela kanye nezinkampani ezizimele kanye izimo ezahlukene yokuhlala kanye izinga lenkonzo. Imizi eminingi iholide ngeke ukuhlela ukudluliswa kusuka esikhumulweni sezindiza / sesitimela esiteshini. Sicela uthole uhlu amahhotela ethandwa kakhulu.
Ihhotela yakhiwe e idolobha elihle "Vesnyanka" ngezinyathelo ezimbalwa kude umgwaqo ovulekile, sesitimela futhi ebhishi ifakwe. Esikhathini impesheni zikhona amakamelo ayisithupha klassnosti obuhlukahlukene. Kuzo zonke, kukhona balcony kanye zokugezela. Ebaleni kukhona ithala ehlobo nge izoso futhi Gazebo ethokomele. Izivakashi angapheka futhi uphumule. Insimu has a bar, igumbi lokudlela futhi yokupaka.
Isayithi ekamu "I-The Economist"
Ihhotela ezingenziwa ukhululekile elise amamitha 300 ukusuka ogwini Black Sea enhliziyweni edolobhaneni Carolino Bugaz. Sihlanganisa umuzwa induduzo service quality. ukhuni Small iyisonto amakamelo ejwayelekile ngaphakathi ngokuchichima oluhlaza. Ukuze izivakashi ifakwe yavula ikamelo layo elikhulu yokudlela, ngezizathu ezemidlalo kanye nezindawo zokungcebeleka.
Le ndawo sesikhashana, sizungezwe izimila eziqhakazayo nezihlahla. Kanti inikeza eziphonsa ezweni sindiso nenjabulo, uphumule ziphuma emizini enothuli futhi zomile ekuphileni kwansuku zonke. I endaweni enokuthula kuye kwaba nomphumela omuhle empilweni psycho-ngokomzwelo futhi kuyasiza uphumule. Izivakashi bahlala amakamelo ukhululekile. Ukuze yamasevisi abo - Inthanethi, izinkantolo tennis, a beach ayimfihlo ilanga awnings kanye yokudlela.
Njengabantu abaningi izindawo iholide kuleli yokungcebeleka Carolino Bugaz. Nezokungcebeleka izindawo usebenza unyaka wonke. Indawo amanani ezingaphezu kuka okungabizi. Izindleko ngokuvamile labashone isizini isiqongo - July no-August.
Ukuvakashela Paris izindleko umzila. Ukuvakashela Disneyland Paris. uhambo Independent eParis
Rhodes noma Crete: nesinqumo esinzima
Squash Ungadliwa izikhala
Izikhangibavakashi. Dagomys (endaweni Lazarevsky Sochi)